चोटपटकबाट बालबालिकालाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? « Lokpath
काठमाडौं । बालबालिकालाई हुनसक्ने चोटपटक वा इन्जरीमा कमी ल्याउन अभिभावक, स्याहारकर्ता र आम जनसमुदायले विभिन्न कदम चाल्न सक्छन् ।
यसका लागि बालबालिकामैत्री सुरक्षित घर, खेल्ने ठाउँ, सडक–बाटोहरू निर्माण गर्नेतर्फ विचार पुर्याउनु अति नै आवश्यक छ । बालबालिकामा हुने चोटपटकका कारण परिवार र समाजमा आइपर्ने बोझ, तिनको रोकथामको महत्वको विषयमा छलफल गर्ने गरेमा घाइतेको औषधि उपचार खर्चमा कटौंती गर्न सकिन्छ भने बालस्वास्थ्य प्रवर्धनमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्दछ ।
एक वर्ष मुनिका शिशुहरू
यद्यपी हामी धेरै साना छौं तरः
हामी निरन्तर बढीरहेका हुन्छौं ।
हामीलाई गल्तीले पनि चोट नलागोस् भनेर तपाईको रेखदेखको धेरै खाँचो छ ।
हामी प्रायः सुत्ने, खाने र रुने मात्र गर्छौं, तर पनि तपाईहरूले हामीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने हो जान्नै पर्छ ।
हामीले ढल्किन, पल्टिन र बस्न सिकेको पनि धेरै भएको छैन, त्यसैले पनि तपाईले हाम्रो सुरक्षाबारे सोच्नै पर्छ ।
हामीहरूलाई घरबाहिर त चोटपटक/इन्जरीको खतरा छदैछ तर घरभित्रै पनि त्यस्ता धेरै खतराहरू हुनसक्छन् ।
चोटपटक/इन्जरीबाट वर्षेनी हामी जस्ता धेरै शिशुहरू घाइते हुने वा मृत्यु पनि हुने गरेको छ ।
तपाईंहरू हाम्रो लागि दुःख कष्ट गर्नुहुन्छ, तर कुनै आपत आइपरेमा हामी आफ्नो स्याहार आफैं गर्न पनि सक्दैनौ।
चाडपर्वमा पनि हामीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनुहोस्
धेरै साना भएकाले हामी लड्यौं भने नराम्ररी घाइते हुनसक्छौं ।
हामी बामे सर्न वा राम्ररी हिंड्न सक्दैनौं, त्यसैले तपाईले हामीलाई यताउता लैजाँदा बोक्नुहोस् ।
तर हामी बढ्दै जाँदा हामी हाम्रा हात र खुट्टा प्रयोग गर्ने भएकाले हामी गुल्टिन सक्छौं ।
तपाईले मलाई समातेर हिंड्दा, कुनै वस्तुमा चिप्लेर वा अल्झेर लड्न सक्नुहुन्छ । तपाईसँगै मलाई पनि चोट लाग्न सक्छ ।
आफ्नो पाइला हेरेर हिंड्नुहोस् । मलाई समातेर भर्याङ्गबाट ओर्लंदा बार समातेर मात्र ओर्लनुहोस् ।
मलाई खाटमा राखेर तेल लगाउँदा ख्याल गर्नु भएन भने म खाटबाटै तल झर्न सक्छु ।
हामीलाई पोलिनबाट जोगाउनुहोस्
दुर्घटनावस घरमा आगो लाग्यो भने मलाई पोल्न सक्छ । म धुँवाले निसास्सिन वा मर्न पनि सक्छु ।
हाम्रो घरमा आगो लाग्दैन भन्ने निश्चित गर्नुहोस् ।
मेरो छाला कमलो र पातलो भएकोले छिटै पोल्छ ।
जाडो याममा तातो पानीले नुहाउन मलाई पनि मन पर्छ । तर, पानी कति तातो छ जाँचेर मात्र मलाई नुहाइदिनुहोस् ।
घरभित्र वा सुत्ने ठाउँमा वा म सुतेको ठाउँमा चुरोट नपिउनुहोस् । त्यसबाट आगलागी हुनसक्छ ।
चुरोटको धुँवा त्यसै पनि स्वास्थ्यका लागि ठुलो खतरा हो ।
आगो बालेको वा खाना पकाउने ठाउँमा मलाई नसुताउनुहोस् । मलाई धुँवाले सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
याद राख्नुहोस् , मलाई कुनै वस्तु तातो छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । त्यसैले मलाई कुनै समस्या नपरोस् भन्ने निश्चित गर्नुहोस् ।
हामीलाई निसास्सिनबाट जोगाउनुहोस् ।
मेरो फोक्सो धेरै सानो भएको र श्वासप्रश्वास प्रणाली कमजोर भएकोले म सजिलै निसास्सिन सक्छु ।
मलाई यी अवस्थाबाट जोगाउनुहोस्;
घरभित्रको धुँवाबाट, बिंडी/चुरोटको धुँवाबाट, ओढ्नेले नाक–मुख छोप्नबाट, मकलबाट निस्कने धुँवाबाट, सुतेको बेला कोल्टो पर्नबाट, सुतेको बेला च्यापिनबाट ।
हामीलाई पानीमा डुब्नबाट पनि जोगाउनुहोस् ।
मेरो वरपर खुला भाँडोमा पानी भरिएको छ भने तपाईंहरूले त्यसलाई संधै छोपेर राख्नुहोस् ।
म जस्ता कति बच्चाहरू त्यस्ता भाँडोमा डुबेर मरेका छन् ।
अब हामी बामे सर्ने र भरखरै हिंड्न शुरु गर्छौं
खाना पकाउने बेला मलाई चुलो नजिक आउन बाट रोक्नुहोस् ।
मैले हात चलाउँदा पोखेर मलाई अनि तपाईलाई पोल्न सक्छ ।
म अझै सानै भएपनि मलाई नयाँ नयाँ कुरा गर्न र खोज्न मन पर्छ ।
याद राख्नुहोस्, यसो गर्दा म ठुलो दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छु ।
बामे सर्दै म बाहिर बारीतिर पनि पुग्न सक्छु । ख्याल गर्नुहोस्, त्यहाँ सर्प, बिच्छी पनि हुन सक्छन् ।
मलाई मेच, टेबुल खाटमा राख्दा होश गर्नुहोस्, म त्यही उभिन र लड्न सक्छु ।
मलाई भर्याङ्ग नजिक वा अग्लो स्थानमा एक्लै नछाड्नुहोस् ।
म उक्लेर वा चढेर त्यहिंबाट लड्न सक्छु । मलाई नराम्रो चोट लाग्न सक्छ ।
कौसीमा छेकबार लगाएको छैन भने मलाई त्यहाँ एक्लै नछोड्नुहोस् । सकभर छिटै त्यसमा बार लगाउनुहोस् ।
भुँईमा वा मैले पुग्ने ठाउँमा तातो चिया, तातो पानी वा तातो खाने कुरा राखेको देखेँ भने म त्यसैलाई छुन चाहन्छु ।
भुँईमा वा मैले पुग्ने ठाउँमा खाना पकाउन वा ताप्नको लागि आगो बाल्नु भएको देखेँ भने मलाई त्यहाँ जान र छुन मन लाग्छ ।
आगोले मलाई पोल्न सक्छ ।
तातो कुराले मेरो छालालाई सजिलै पोल्छ । त्यसैले तपाईंले यसको ख्याल गर्नुहोला ।
मेरो कमलो छालालाई मेरो आफ्नै वा तपाईका नङ्ले कोपर्नबाट बचाउन पनि विशेष ध्यान दिनुहोस् ।
एक वर्षदेखि पाँचवर्ष सम्म
म एक वर्ष पुगेपछि तपाईहरू कत्ति खुशी हुनु भएको छ । तर म अलि ठुलो भए पनि आफ्नो स्याहार गर्न र खतरा चिन्न सक्दिन ।
अझै पनि घरभित्र वा घर वरपरकै धेरै कुराहरूले मलाई घाइते बनाउने खतरा छ ।
मलाई कुनै नौलो चिज साना, ठुला, जेसुकै देखेपछि त्यसैसँग खेल्न मन लागिहाल्छ ।
मलाई एक्लै खेल्न पनि जान नदिनुहोस् ।
म हातले समात्न सक्ने जुनसुकै वस्तु पनि मुखमा हाल्छु । यसरी जे पायो त्यही मुखमा हाल्दा घाँटीमा अड्किने, विषालु हुने, वा अन्य पेटका रोग पनि लाग्न सक्छ ।
मेरो वरपर भएका सिक्का–पैसा, गेडागुडी, स–साना खेलौनाहरू हटाउनुहोस् र चाहिएको बेलामा मात्र मलाई दिनुहोस् ।
नुहाउने बेलामा म धेरै चलेर चिप्लिन पनि सक्छु र भुँईमा ठोक्किएर नराम्ररी चोट पनि लाग्न सक्छ । मेरो नुहाउने ठाउँलाई सुरक्षित बनाउनुहोस् ।
मलाई सुताउने ठाउँको पनि ख्याल गर्नुहोस् । तखतामा केही ढल्ने कुरा राख्नु भएको रहेछ भने मुसा, बिरालोले ढलाएर मलाई चोट लगाउन पनि सक्छन् ।
हेर्नुहोस् त म त ठुलो हुँदैछु नि !
अब मलाई माथि माथि पुग्न र त्यहाँबाट हेर्न रहर लाग्छ ।
त्यसैले म पिर्का, डोको वा भाँडाकुँडाको सहायताले झ्यालमा चढेर बाहिरतिर हेर्ने पनि गर्दछु ।
मलाई रुखमा चढ्न पनि धेरै मन पर्छ । एक्लै वा साथीसँग रुखमा चढेर खेल्दा म त्यहाँबाट लडेर घाइते हुने र हाड भाँचिने पनि हुनसक्छ ।
मलाई टेबुल वा अग्लो ठाउँमा राखेको कुरा भेट्न र त्यसलाई समात्न मन लाग्छ । यसो गर्दा मलाई धेरै खतरा हुनसक्छ भन्ने थाहै हुँदैन ।
मलाई एक्लै छाड्नु भयो भने तपाईलाई पछ्याउँदै काम गरेका ठाउँमा पनि आइपुग्छु । एक्लै घरमा बसे पनि चोटपटक लगाउन सक्छु । मलाई तपाईहरूको रेखदेखको धेरै खाँचो पर्दछ ।
मैले तपाईहरू वा हजुरबा–आमाको औषधि भेटें भने पनि खाइदिन्छु । त्यसरी औषधि खाएँ भने मलाई विषालु असर पनि हुनसक्छ ।
घरको भुँइतिर शिशीमा केही किटनाशक, केमिकल वा रसायनिक पदार्थ भेटेँ भने पनि म खाइदिन्छु । यसले मलाई धेरै नराम्रो असर पनि गर्न सक्छ ।
अब म तपाईले सिकाएका सुरक्षासम्बन्धी केही कुराहरू सिक्न पनि सक्छु । त्यसैले मलाई माया गरेर मेरो सुरक्षाका कुराहरू सिकाउन शुरु गर्नुहोस् । तर पूर्ण रुपमा सिकेको कुरा पालना गर्न मलाई अझै समय लाग्छ । त्यसैले घरवरपर र बाहिर मलाई हुनसक्ने खतराहरूको खोजि गरेर तिनलाई हटाउनुहोस् ।
स्कुल जाने उमेरका बालबालिका
मलाई यो उमेरमा घर भित्रभन्दा घर बाहिर खेल्न मनपर्छ ।
स्कुल जाँदाखेरी मलाई बाटोमै पनि चोटपटक लाग्ने धेरै कुराहरू हुन्छन् ।
एक्लै स्कुल पठाउनु भयो भने मलाई चोट लाग्ने खतरा धेरै बढी हुन्छ ।
म स्कुलबाट फर्के पछि सकभर मेरो शरीरमा कतै चोट पो लागेको छ कि भनेर जाँच्नुहोस् । आफुलाई चोट लागेको कुरा मैले नभनेर लुकाएको पनि हुनसक्छ ।
यसरी जाँच गर्दा मेरो चोटपटकको कारण सोध्नुहोस् र अबदेखि मलाई वा अरुलाई त्यस्तो नहोस् भनेर त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
मैले एक्लै वा साथीसँग तलका खतरापूर्ण काम गर्दैछु कि ? विचार गरौं ।
माछा मार्ने, पौडी खेल्ने
ठुलो साइकल चलाउने
झ्यालमा उक्लँने, घरको छाना माथि हिंड्ने
गुलेली खेल्ने, बार नाँघ्ने, धारिलो हतियार खेल्ने,
रुख चढ्ने, चलिरहेको बसको पछाडि झुण्डिने
भिरालोमा दगुर्ने, खाल्डो वरपर वा नजिकै खेल्ने
अँध्यारोमा वा जंगलमामा एक्लै हिंड्ने
भाँचिएको ढिकिच्याँउ वा अन्य असुरक्षित खेलौनासँग खेल्ने
दश वर्ष पुगेका बालबालिका
हामी बालबालिका १० वर्ष पुगेपछि हाम्रो शरीरमा केटा र केटी हो भनेर स्पष्ट छुट्टिने गरी शारीरिक परिवर्तन आउँछ । हामीहरू आफै पनि यही बेला केटा र केटीको भिन्नता थाहा पाउँछौं । हामी यसै उमेरमा साथी बनाउने गर्दछौं ।
नेपालमा १० वर्ष पुगे पछि हामीजस्ता बालबालिकाले घरको काममा सघाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि थपिन्छ । जस्तै भाई–बहिनीको हेरचाह, भान्सा, गोठ र खेतवारीमा काम गर्ने, घाँस–दाउरा गर्ने आदि । यस्ता काम गर्दा हामीलाई ठुल्ठुला चोटपटक पनि लाग्ने गर्दछन् ।
बालअधिकारका हिसाबले यस उमेरमा हामीले जोखिमपूर्ण काम गर्नु हुदैन ।
हामीले टाढाको स्कुल जानु पर्छ, कच्ची बाटोमा साइकल चलाउनु पर्छ ।
हामी बसमा यात्रा गर्दा जोखिमपूर्ण व्यवहार पनि देखाउँछौं ।
हाम्रो उमेरका कतिपय बालबालिका चोटपटक लाग्ने धेरै खतरा भएका कामहरू गर्दा घाइते, अपाङ्ग वा मृत्यु पनि भएका छन् ।
खाना पकाउने ठाउँमैं आगलागी भएर पनि कतिपय महिला र केटीहरू पोलिएर कुरुप हुने, घाइते, अपाङ्ग वा मृत्यु पनि हुन्छ ।
एक अध्ययनले हरेक वर्ष नेपालमा १०–१९ वर्षका करीव १,७०० किशोर–किशोरीहरूको चोटपटक (इन्जरी) बाट मृत्यु हुन्छ भने, करीव तीन लाख जति घाइते हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
किशोरावस्था हामीहरूले निम्न अनुसारका कृयाकलापहरू गर्दछौ;
आफ्नो शरीरको बनावट र अनुहारमा ध्यान दिने
सजिलैसँग भावुक हुने
घनिष्ट साथी बनाउने
केटाले केटीलाई र केटीले केटालाई साथी बनाउने
बाहिर जान रमाउने
कहिलेकाँही समयमा घर नआउने,
विभिन्न खालका कल्पना गर्ने
कौतुहलताको निराकरण गर्न खोज्ने
किशोरावस्थामा हामीहरू प्रायः
जोखिमयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गर्दछौं ।
अरुको देखासिकी गर्ने चलन पनि बढि नै हुन्छ ।
यसबाट हामीहरूलाई चोटपटक लाग्ने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ ।
त्यसैगरी यस उमेरमा हामी झै–झगडा गर्ने, कुलतमा लाग्ने र हिंसात्मक व्यवहार पनि देखाउँछौं ।
तर हामीहरूले समूहमा मिलेर राम्रा–राम्रा कामहरू पनि गर्न सक्छौं । चोटपटक (इन्जरी) रोकथाममा पनि सहयोग गर्न सक्छौं ।
चोटपटकका समस्याहरूलाई रोकथाम गर्न अभिभावकले गर्नु पर्ने आधारभूत कामः
घर वरपर रहेका जोखिम वा खतराका वस्तुहरू पत्ता लगाउने र हटाउने ।
बच्चाको राम्रो रेखदेख गर्ने ।
बच्चालाई खतरापुर्ण ठाउँमा जानबाट रोक्न छेकबार लगाउने ।
बच्चालाई चुलोमा आउन बाट रोक्ने ।
परिवार र समुदायका सबैले आफु सुरक्षित हुने र बालबालिकालाई पनि सिकाउने ।
प्रकाशित मिति: २०७७,चैत्र,३१,मंगलवार १८:४०